I-Liogerma Guesthouse - Igumbi eliphindwe kabili - I-Airbnb
I-Liogerma Guesthouse - Igumbi eliphindwe kabili
Pozar Baths, i-Greece
Igumbi e-ihhotela ibungazwe ngu-Πέτρος
U-Πέτρος Ungumbungazi ovelele
Yakhelwe engadini evundile enamafir nezimbali ezimibalabala, iGuesthouse Liogerma isendaweni emaphakathi edolobhaneni laseKato Loutraki Aridea, ikhilomitha elingu-1 ukusuka eziphethwini ezishisayo ezidumile ze-Pozar Baths. Indlu yezivakashi ephethwe umndeni, esanda kulungiswa, inikeza izivakashi ukuthula nokuphumula ezikudingayo, njengoba wonke amagumbi anemibhede elingana nenkosi, imibhede enethezekile, iziko lemicimbi ekhethekile nanoma yini enye isivakashi ngasinye esingase siyidinge.
Sinegumbi lebhulakufesi, amagumbi aneziko kanye nokufinyelela kwamahhala kwe-Wi-Fi.
Amakamelo endlini yezivakashi anikeza ukubukwa kwengadi futhi ahlotshiswe ngesikhumba noma imibhede yezinkuni ezimnyama ngemibala ethambile. Iyunithi ngayinye inendawo yokuhlala encane kanye nendlu yokugezela yangasese eneshawa noma ubhavu wokugeza. I-TV enesikrini esiyisicaba kanye nesiqandisi kuhlinzekwa.
Ibhulakufesi lendabuko elinophaya bokuzenzela kanye nojamu linikezwa nsuku zonke endlini yokudlela ngaseziko. Engadini kunezindawo zokosa inyama okudlela ngaphandle. Izindawo zokudlela kanye nezimakethe ezincane zihamba ibangana nje ukusuka kule ndawo.
UΠέτρος Ungumbungazi ovelele